Ungayivikela Kanjani i-Akhawunti Yami ku-Twitter? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
May 12, 2021 0 Comentarios 542
Umsebenzisi, wake waqinisekisa ukuthi i-Akhawunti yakhe ye-Twitter inayo ukuphepha kwakho kubeka engcupheni, uphakanyiswa ukuthi uthathe lezi zivikelo ezilandelayo Ukuvikela i-Akhawunti yakho: Lahla amaTweets angafuneki abhalwe ngenkathi ukuphepha kuxegiselwa.
Futhi, hlola i-PC yakho ukuze ubone ngeso lengqondo amagciwane kanye ne-malware, faka amabala okuphepha kusistimu yakho yokusebenza nezinhlelo zokusebenza, sebenzisa njalo iphasiwedi entsha eStrong, cabanga ngenketho yokusebenzisa ukuqinisekiswa kokungena ngemvume.
En ukuqinisekiswa kokungena ngemvume, Umsebenzisi unethuba lokwethula isheke lesibili ukuze aqiniseke ukuthi nguye kuphela ongangena ku-Akhawunti yakhe ye-Twitter hhayi kubantu besithathu, ngenhloso engafanele yokulimaza.
Ukuhlukunyezwa online ku-Twitter
Izimo eziningi ezibonakalayo zingenzeka kwinethiwekhi yokuxhumana nabantu i-Twitter; njenge, isibonelo: Ukuhlukunyezwa Kwe-Inthanethi. Kukhona abasebenzisi be-Twitter abakade bekhona Ukuhlukunyezwa Kwe-inthanethi; Uma uMsebenzisi azi umuntu osengozini, angamsiza ngokubhekela lawa macebiso alandelayo anikezwa yi-Twitter:
Umsebenzisi kumele azame usiqonde isimo, ukukulalela ngokucophelela nokuthatha isimo sakho ngokungathi sína; thola lowo muntu afune usizo lochwepheshe: Therapist, ummeli, amaphoyisa noma omunye umuntu othembekile, onamasu okubahola futhi athuthukise imizwa.
Njengombukeli, Umsebenzisi unenketho yokungabi nandaba nokuhlukunyezwa okuku-inthanethi futhi afune ukuvikela umuntu othintekile, amsekele emizweni yakhe; ekugcineni, bika okuqukethwe ku-Twitter ngokulandela imiyalo endaweni yesikhulumi se-Twitter.
Vimbela futhi unganaki ukuhlukunyezwa kwe-ONLINE TWITTER
Ukuxhuma nenani elikhulu labantu kungaba yinto enothisayo; kepha futhi kuyaboleka ekubeni ngumthombo we ukukhungatheka nokungaqondi kahle uma umongo wengxoxo ungabonakali.
Lapho uMsebenzisi ebuka ifayela le- I-tweet ehlaselayo, kuphakanyiswa ukuthi ucabangisise ngengxoxo, ubhekisise kahle umongo weTwitter, omfishane futhi inhloso yombhali ingachazwa ngokungeyikho; Futhi, phendula ku-Tweet ukuze ujoyine ingxoxo futhi ukhulume ngokukhathazeka kwakho.
Umsebenzisi unezinketho kungxenyekazi ye-Twitter yokuvimba nokuziba i-Akhawunti yamaTweets ayo ahlaselayo. Uma uvimba umsebenzisi, awutholi lwazi oluvela kuye; Ngeke futhi ukubone ekusebenzisaneni kwakho nomugqa wesikhathi. Ngiphakamisa ukuthi unganaki.
Akuvamile ukuthi uMsebenzisi adinge Xhumana ne-Twitter ukuthola isixazululo sanoma iyiphi inkinga, ngoba ipulatifomu le-Twitter likuthembisa wonke amathuluzi, imiyalelo, izinketho nemihlahlandlela yokuzulazula inethiwekhi yayo ngokuthula kwengqondo futhi uyijabulele ngokugcwele.
Kodwa-ke, kunezikhathi lapho uMsebenzisi eyedwa engakwazi ukuxazulula izinkinga okukuhluphayo kwinethiwekhi yokuxhumana nabantu futhi udinga ukuxhumana ne-Twitter ukuthola usizo oludingekayo kongoti bakho abangochwepheshe
I-Twitter inikeza uMsebenzisi yayo Isikhungo Sosizo etholakala engxenyeni yewebhusayithi yakho; Lapha uchaza igxathu negxathu isenzo ngasinye uMsebenzisi okudingeka asithathe ukuxazulula izinkinga ezahlukahlukene ezamehlula ekusetshenzisweni kwe-Twitter.
1 Ukuhlukunyezwa online ku-Twitter
2 Vimbela futhi unganaki ukuhlukunyezwa kwe-ONLINE TWITTER
3 Xhumana ne-Twitter
Yiziphi izici ezifihliwe ze-Gmail?